DABA-DAL: Maxaa laga ogaadey KIISKA Ciise Tarabuun? (Xog cusub) | Hadalsame Media
Home Wararka DABA-DAL: Maxaa laga ogaadey KIISKA Ciise Tarabuun? (Xog cusub)
DABA-DAL: Maxaa laga ogaadey KIISKA Ciise Tarabuun? (Xog cusub)
(Muqdisho) 09 Okt 2019 – 28-kii September booliska Kenya ayaa bartooda twitter-ka ku qoray in dalkooda uu soo galay Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi oo loo yaqaan Ciise Tarabuun. Booliska ayaa sheegay in Cabdiwaaxid oo ah muwaadin Soomaaliyeed uu horey uga tirsanaa amniyaatka kooxda Al-Shabaab.
Maalmo kadib dowladda Soomaaliya ayaa qoraal ay soo saartay ku sheegtay in Cabdiwaaxid uu soo dhameystay xabsi lagu xukumay, sidaas darteedna uusan hadda wax dambe ah lahayn.
Haddaba maxaan ka ognahay Cabdiwaaxid. Barnaamijka Galka Baarista oo la hadlay dhinacyo kala duwan ayaa soo bandhigaya xogta Cabdiwaaxid Khaliif Cabdi. Waxaa soo jeedinaya Haaruun Macruuf oo ka tirsan idaacaddda VOA Somali.
Previous article”Haddii adiga oo guriga fadhiya uu Madaxwayne albaabka kuusoo garaaco maxaad samayn lahayd?”
Next articleSomalia oo muddo dheer kaddib tillaabo ka qaadday arrin dhib ku haysey shacabka